Holidu na-ekwupụta mwepụta nke ngwa ngwa ngwa maka gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Edere Esteban | | android, Noticias
Ebe ọ bụ na e gosipụtara ha na Google I / O nke afọ gara aga, anyị na-ahụ otú Ngwa ngwa na-enweta ọnụnọ. Ha abụrụla ezigbo ihe ọzọ na ngwa ọdịnala, ọkachasị maka ịdị mfe nke iji ha na eziokwu na ọ dịghị ha mkpa itinye ya na ekwentị. Holidu chọrọ ịbụ otu n'ime ụlọ ọrụ mbụ na mpaghara ndị njem iji gosi ngwa ha ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na ị maghị ezumike, ọ bụ otu n’ime usoro mgbazinye ezumike ezumike kachasị ewu ewu taa. Ekele ya anyị nwere ike chọta ụlọ, ime obodo ụlọ na ụdị ezumike ndị ọzọ.
Ugbu a ha bidoro ngwa ngwa ngwa nke gam akporo ha, ụlọ ọrụ ahụ bụ otu n'ime ndị izizi na mpaghara ndị njem iji gosipụta ngwa ngwa ha maka gam akporo. Ihe na na-enye ha ohere karịa ọtụtụ ụlọ ọrụ na mpaghara ahụ. Holidu nwere ọtụtụ ihe kpatara ịbido ngwa ngwa a, ebe ọ bụ na ha ahụla uru nke ụdị ngwa a na-enye ndị ọrụ.
1 Holidu ngwa ngwa maka gam akporo
2 Esi nwalee Holidu gam akporo ngwa
Holidu ngwa ngwa maka gam akporo
Nhọrọ nke ngwa dị maka gam akporo taa buru ibu. Na mgbakwunye, ọ na-aga n'ihu na-eto kwa ụbọchị. Yabụ, ọtụtụ ndị ọrụ na-ala azụ itinye ngwa na ekwentị ha, n'ihi na ha na-eche na ha arụnyela ọtụtụ, nke na-emetụta oghere na ekwentị ma mee ka ọ rụọ ọrụ nwayọ nwayọ. Yabụ, ịmalite ngwa ngwa maka gam akporo bụ azịza zuru oke.
Ebe ọ bụ na ndị ọrụ ga-enwe ike enwe isi ihe nke ngwa, na-enwe mmekọrịta dị mma na ya, mana na-enweghị ịwụnye ya na ekwentị. Yabụ ị ga-enwe ike iji ọrụ Holidu wee chọta mgbazinye na ebe ezumike gị ọzọ, mana na-enweghị ịwụnye ngwa na ekwentị gị. Ọtụtụ ihe ga-adị gị mma ma n’etinyeghị ohere nchekwa na ngwa gam akporo gị
Mkpebi Holidu wepụtara ngwa ngwa a na-eme ka ọ nwekwuo nghọta karịa ịtụle ngalaba nke ụlọ ọrụ ahụ. O nwere ike ịbụ na mpaghara ndị njem ahụ bụ otu n'ime mpaghara nwere oge kachasị elu. Otutu n'ime oru a bu n'ime onwa ole na ole. Yabụ, ngwa nwere njirimara ndị a abụghị ihe ndị ọrụ ga-eji mgbe niile. Yabụ itinye ya na ekwentị anaghị enwe isi.
Ugbu a, ekele maka nhọrọ a, usoro a dị mfe karị. Onye ọrụ ahụ agaghị enwe ngwa Holidu arụnyere na ekwentị ha n'afọ ahụ dum. Site ugbu a gaa n'ihu, mgbe ịchọrọ iji ọrụ ndị ụlọ ọrụ na-enye, ị ga-enweta naanị iji ngwa ngwa. Yabụ, ị nwere ike ịchọ mgbazinye ụlọ ịchọrọ maka oge ezumike gị ma mgbe emechara, ị nwere ike ịpụ ngwa ahụ. N'ụzọ dị otú a, a na-echekwa nrụnye na usoro ntinye na-esote ma ọ bụrụ na ejighị ya.
Esi nwalee Holidu gam akporo ngwa
Maka ndị ọrụ niile nwere mmasị na-anwale ngwa ahụ, emere ngwa ngwa maka ndị ọrụ na Playlọ Ahịa Google. Inwe ike ịnụ ụtọ ya bụ ihe dị mfe. Nnọọ na ị ga-abanye na ngwa ahịa maka igwe na ebe ahụ, na igwe nyocha, dee Holidu. Ngwa ụlọ ọrụ ahụ nwere ga-apụta ozugbo.
Mgbe ị na-abanye na nkọwa gị, otu n'ime nhọrọ na-apụta bụ "Gbalịa ugbu a". Naanị pịa na nhọrọ iji nwee ike ịnụ ụtọ ngwa ahụ, dịka a ga - asị na etinye ya na ekwentị. N'ụzọ dị otu a, ịnwere ike iji elele nke ngwa ahụ na-enye gị wee chọta ụlọ ma ọ bụ ụlọ ime obodo ị na-achọ na ọnụahịa kachasị mma, yana ego ruru 55% mgbe ụfọdụ. Yabụ ọ bụ ezigbo nhọrọ ịtụle.
Ngwa a Holidu Instant App bu dakọtara na ekwentị gam akporo niile nwere nsụgharị 5.0 na n'elu, nke bụ ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọrụ taa. Ọ dị ugbu a na mkpokọta asụsụ 11 dị iche iche, gụnyere Spanish.
Ọ bụ nzọụkwụ dị oke mkpa maka akụkụ nke ngwa ngwa njem na gam akporo. Ebe ọ bụ na a na-eji ọtụtụ ngwa ndị a eme ihe maka obere oge wee chefuo ozugbo oge ezumike gafere, na-ewere ohere na ebe nchekwa anyị n'amaghị ama. N'ihi Holidu Instant App anyị nwere ike ịchekwa ezumike obibi anyị n'ụzọ dị mfe. Yabụ, anyị ga-eji ngwa ahụ mgbe anyị chọrọ ya. N'ihi ya, ọ gaghị ewere ohere na-enweghị isi na ngwaọrụ anyị. Kedu ihe ị chere gbasara ngwa a?
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịnwale ya, gaa na ụlọ ahịa ngwa Storelọ Ahịa Play.
Holidu: Ụlọ ezumike
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Holidu weputara ngwa ngwa ngwa nke aka ya
IGTV, nke a bụ ngwa ọhụụ ọhụrụ nke Instagram iji sọ mpi megide YouTube
Nke a bụ ihuenyo nke Samsung Galaxy Note 9